Somalia: Howlgal ka socda gobolka Shabeellaha Hoose
BARIRE, Somalia - Ciidamada dowladda Federaalka, oo taageero ka helaya AMISOM iyo Kumaandooska Mareykanka ayaa saaka weerar ku qaadey Xoogaga Al shabaab ee ku sugan qeybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxay weerarkooda kuu billaabeen Deegaanka Bariire, oo bishii May lagu diley Askari uu dhashay dalka Mareykanka, kana tirsanaa Navy SEAL, xilli uu ka qeyb-qaadanayay Howlgalka ka dhan ah Al shabaab.
Diyaarado dagaal ayaa Ciidamo kamid ah Kumaandooska Dowladda Somalia iyo Mareykanka ku daadiyay banaanka Bariire, kuwaasi oo dagaal qaraar kadib kala wareegay Al shabaab deegaankaasi.
Ciidamada ayaa usii gudbay Tuulooyin horleh, oo ay kamid yihiin Janaale, Mubarak iyo Awdheegle, oo lagu soo waramayo inay ka dhaceen dagaal xoogan, oo ay la galeen Malleeshiyada Kooxda Al shabaab.
Wararka Warsidaha GO uu ka helayo gobolka ayaa sheegaya in Ciidamada iskaashanaya ay iska-caabin kala soo kulmeen Janaale, kadib markii Al shabaab ay difaacyo adag ka sameysteen duleedka Deegaanka.
Goobaha sidoo kale dagaalka uu ka dhacayo waxaa kamid ah duleedka Tuulada Toora-toorow, oo la rumeysan yahay inay ku sugan yihiin hogaamiyaal sare oo katirsan Al shabaab.
Saraakiisha maamulka gobolka Shabeellaha hoose, ayaa sheegay in Howlgalka billowday , uu yahay mid sii socon doono, al shabaab looga saarayo deegaanada wali ku harsan gacanta Kooxda Al shabaab.
Ciidamada dowladda Federaalka Somalia oo Howlgallo ka sameeyay Muqdishu
Soomaliya 28.05.2017. 12:49
MUQDISHU, Somalia - Howlgal ballaaran, oo lagu xaqiijinayo amniga Muqdishu, ayaa saaka ka dhacay qeybo ka tirsan magaalada, kuwaasi oo lagu soo qabtey dhalinyaro looga shakiyay inay yihiin Al shabaab.
Ciidamada oo isagu jira Boolis iyo Nabad Sugida ayaa xir ...